DOWNLOAD NAPS2 SOFTWARE NYOCHA MAKA N'EFU - MMEMME NYOCHA - 2019
Ndị na-emepụta ihe nkiri na-arụ ọrụ, nke bụ Intel HD Graphics devices, nwere obere ọrụ ngosi. Maka ndị dị otú ahụ, ọ dị oké mkpa iji wụnye akụrụngwa iji mee ka arụmọrụ dị ala. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya na ụzọ ịchọta na wụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka ikuku nke Intel HD Graphics 2000.
Otu esi arụnye software maka Intel HD Graphics
Iji rụọ ọrụ a, ịnwere ike iji otu n'ime ụzọ dị iche iche. Ha niile dị iche iche, ma dị ezigbo mkpa na ọnọdụ e nyere. Ịnwere ike iwunye ngwanrọ maka ngwaọrụ a kapịrị ọnụ, ma ọ bụ tinyechaa ngwanrọ nke ukwuu maka ngwa niile. Anyị ga-achọ ịkọrọ gị ụdị ụzọ ndị a na nkowa.
Usoro 1: Web Web Weebụ
Ọ bụrụ na ịkwesịrị ịwụnye ọkwọ ụgbọala ọ bụla, mgbe mbụ, ị ga-achọ ha na ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti nke onye nrụpụta ngwaọrụ. Ikwesiri iburu nke a n'uche, dika ndụmọdụ a abughi nani maka ihe ndi Intel HD Graphics. Usoro a nwere ọtụtụ uru karịa ndị ọzọ. Mbụ, ịnwere ike ijide n'aka na ị gaghị ebudata usoro mmemme na kọmputa gị ma ọ bụ laptọọpụ. Nke abuo, software sitere na saịtị ndi ochichi na-ejikota ngwa ahia gi. Na, nke atọ, na ihe ndị dị otú ahụ, ọhụụ ọhụrụ nke ndị ọkwọ ụgbọala na-apụta mgbe niile. Ka anyị gaa n'ihu nkọwa nke usoro a na ihe atụ nke ndị na-emeputa ihe nkiri Intel HD Graphics 2000.
Na njikọ ndị a na-aga na akụ nke Intel.
Ị ga-achọta onwe gị na isi peeji nke ebe nrụọrụ weebụ gọọmenti rụrụ. N'isi isi saịtị, n'elu ogwe anụnụ anụnụ n'elu, ị ga-achọ ngalaba "Nkwado" ma pịa bọtịnụ òké aka ekpe aha ya.
N'ihi ya, n'akụkụ aka ekpe nke ibe ahụ, ị ​​ga-ahụ menu nchịkọta nhọrọ na listi nke nkewa. N'ime ndepụta, chọọ maka eriri ahụ "Nbudata na ndị ọkwọ ụgbọala", wee pịa ya.
Ihe ndi ozo ndi ozo ga - abia n'otu ebe. Ọ dị mkpa iji pịa akara nke abụọ - "Chọọnụ ndị ọkwọ ụgbọala".
Omume niile a kọwara ga-enye gị ohere ịnweta ihuenyo nkwado nkà na ụzụ nke Intel. N'etiti etiti nke ibe a, ị ga-ahụ ngọngọ ebe ebe ọchụchọ dị. Ịkwesịrị ịbanye na mpaghara a aha nke ngwa ngwaọrụ Intel nke ịchọrọ ịchọta ngwanrọ. Na nke a, tinye uru ahụIntel HD Graphics 2000. Mgbe nke ahụ gasịrị, pịa igodo dị na keyboard "Tinye".
Ihe a niile ga - eme ka ị nweta ebe ị na - ebudata onye ọkwọ ụgbọ ala ahụ. Tupu anyị amalite ibudata ngwanro ahụ n'onwe ya, anyị na-akwado mbụ ịhọrọ nsụgharị na bitation nke sistemụ arụmọrụ. Nke a ga - ezere njehie na usoro nhazi ahụ, nke nwere ike ịmepụta site na incompatibility nke ngwaike na ngwanrọ. Ị nwere ike ịhọrọ OS na nhọrọ pụrụ iche na ibe ebudata. Na mbido, ndepụta a ga - enwe aha. "Ọ bụla sistemụ".
Mgbe osịrị os osụpụtara, a ga-ewepụ ndị ọkwọ ụgbọala niile na-akwadoghị site na listi ahụ. N'okpuru ebe a bụ naanị ndị na-ada gị. Enwere ike inwe ọtụtụ nsụgharị software na ndepụta nke dị iche na mbipute. Anyị na-akwado ịhọrọ ndị ọkwọ ụgbọala kachasị ọhụrụ. Dịka iwu, ụdị ngwanrọ ahụ bụ nke mbụ. Iji nọgide n'ihu, ịkwesịrị ịpị aha nke software ahụ n'onwe ya.
N'ihi ya, a ga-ebute gị gaa na peeji nke nwere nkọwa zuru ezu nke ọkwọ ụgbọala ahọrọ. N'ebe a, ị nwere ike ịhọrọ ụdị nbudata faịlụ nbudata - debe ma ọ bụ faịlụ ọ bụla ejiri. Anyị na-akwado ịhọrọ nhọrọ nke abụọ. Ọ na-adịkarị mfe na ya. Iji kwanye ọkwọ ụgbọala, pịa bọtịnụ n'akụkụ aka ekpe nke ibe ahụ na aha faịlụ n'onwe ya.
Tupu faịlụ amalite, ị ga-ahụ windo ọzọ na nyocha ihuenyo. Ọ ga-ederede ederede ikikere iji Intel software. Ị nwere ike ịgụ ihe ederede kpamkpam ma ọ bụ ghara ime ya ma ọlị. Isi ihe bụ ịnọgide na-pịa bọtịnụ ahụ, nke na-akwado nkwekọrịta gị na nkwekọrịta nke nkwekọrịta a.
Mgbe bọtịnụ ahụ chọrọ, faịlụ nwụnye nke ngwanrọ ga-amalite ozugbo. Anyị na-eche nkwụsị nke nbudata ma na-agba faịlụ a ebudatara.
Na windo mbụ nke ntinye, ị ga-ahụ nkọwa nke ngwanrọ ahụ ga-arụnyere. Ọ bụrụ na ịchọrọ, ị na-amụ ihe edere, wee pịa bọtịnụ ahụ. "Na-esote".
Mgbe nke ahụ gasịrị, usoro iwepụta faịlụ ndị ọzọ nke usoro ahụ ga-achọ n'oge usoro nhazi ahụ ga-amalite. N'oge a, ọ dịghị mkpa ime ihe ọ bụla. Naanị ichere njedebe nke ọrụ a.
Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ọkachamara ọkachamara na-esote ga-apụta. Ọ ga-enwe ndepụta nke ngwanrọ na usoro ihe omume ahụ na-amalite. Na mgbakwunye, a ga - enwe nhọrọ ozugbo ịmalite WinSAT - a bara uru nke nyochaa arụmọrụ nke usoro gị. Ọ bụrụ na ịnweghị ka nke a mee n'oge ọbụla ịmalite kọmputa gị ma ọ bụ laptọọpụ - hichaa akara kwekọrọ. Ma ọ bụghị ya, ịnwere ike ịhapụ ọnweghị oke agbanwe agbanwe. Iji nọgide na usoro nwụnye, pịa bọtịnụ ahụ "Na-esote".
Na windo na-esote, a ga-enye gị ohere ịmụ akwụkwọ nke nkwekọrịta ikike. Na-agụ ma ọ bụ - họrọ naanị gị. N'ọnọdụ ọ bụla, ịkwesiri ịpị bọtịnụ ahụ. "Ee" maka itinyekwu ihe.
Mgbe nke ahụ gasị, windo installer ahụ ga-apụta, nke ga-anakọta ozi niile gbasara ngwanrọ ị họrọ - ụbọchị ntọhapụ, mbipụta ọkwọ ụgbọala, ndepụta nke os na-akwado, na ihe ndị ọzọ. Ị nwere ike ịchọta ozi a maka ime ka mmadụ kwenye, na-agụ ihe ederede n'ụzọ zuru ezu. Iji malite ịwụnye ọkwọ ụgbọala ahụ kpọmkwem, ịkwesịrị ịpị na windo a "Na-esote".
Ọganihu nke nwụnye, nke na-amalite ozugbo na ịpị bọtịnụ gara aga, ga-egosipụta na windo dị iche. Ọ dị mkpa ichere maka njedebe nke nwụnye. Nke a ga - egosi site bọtịnụ nke na - egosi. "Na-esote"na ederede na ihe kwesiri ekwenye. Pịa bọtịnụ a.
Ị ga-ahụ windo ikpeazụ nke metụtara usoro a kọwara. Ọ ga-enye gị ịmalitegharịa usoro ahụ ozugbo ma ọ bụ kwụsị oge a ruo mgbe ebighị ebi. Anyị na-akwado ime ya ozugbo. Naanị akara akara achọrọ ma pịa bọtịnụ a hụrụ n'anya. "Emere".
N'ihi ya, usoro gị ga-amaliteghachi. Mgbe nke a gasịrị, a ga-arụzị ngwa ngwa maka chipset HD Graphics 2000, ngwaọrụ ahụ ga-adị njikere maka ọrụ zuru ezu.
N'ọtụtụ ọnọdụ, usoro a na-enye gị ohere ịwụnye ngwanrọ n'enweghị nsogbu ọ bụla. Ọ bụrụ na ị nwere nsogbu ọ bụla maọbụ na enweghị mmasị na usoro a kọwara, mgbe ahụ, anyị na-atụ aro ka ị mara nke ọma na nhọrọ ntinye nke ngwanrọ ndị ọzọ.
Usoro 2: Firmware iji wụnye ndị ọkwọ ụgbọala
Intel eweputara uru pụrụ iche nke na-enye gị ohere ịchọpụta ihe nlereanya nke ndị na-ese ihe nkiri gị ma wụnye ya software. Usoro nke a, ị ga-abụ dị ka ndị a:
Maka njikọ gosipụtara ebe a, gaa na saịtị nbudata nke ọrụ ahụ a kpọtụrụ aha.
N'elu nke a, ịchọrọ ịchọta bọtịnụ. Download. Mgbe ịchọtara bọtịnụ a, pịa ya.
Nke a ga-amalite usoro nbudata faịlụ nwụnye na laptọọpụ / kọmputa gị. Mgbe ebudatara faịlụ ahụ nke ọma, mee ya.
Tupu ejiri ya rụọ ọrụ, ịkwesịrị ikwenye na nkwekọrịta ikikere ikikere Intel. Ntube nkwekọrịta nke nkwekọrịta a ka ị ga-ahụ na windo na-egosi. Anyị kwadoro akara nke pụtara nkwenye gị, wee pịa bọtịnụ ahụ "Echichi".
Mgbe nke ahụ gasịrị, nrụnye ozugbo nke software ga-amalite ozugbo. Anyị na-echere nkeji ole na ole ruo mgbe ozi banyere njedebe nke ọrụ ahụ gosipụtara na ihuenyo.
Iji mezue nwụnye, pịa bọtịnụ ahụ "Gbaa ọsọ" na windo na-egosi. Tụkwasị na nke ahụ, ọ ga-enye gị ohere iji ngwa ngwa arụ ọrụ.
Na windo mbụ, pịa bọtịnụ. "Malite nyocha". Dị ka aha ahụ na-atụ aro, nke a ga-enye gị ohere ịmalite usoro nke ịlele usoro gị maka ọnụnọ nke onye na-emepụta ihe nkiri Intel.
Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ị ga-ahụ nsonaazụ ọchụchọ na windo dị iche. Ngwa ntanetị ga-adị na tab. "Ndịna eserese". Mbụ ịkwesịrị ịkụnye ọkwọ ụgbọala nke a ga-ebugo. Mgbe nke ahụ gasịrị, ị dee na raara onwe ya nye ụzọ nke a ga-ebudata faịlụ ntinye nke ngwanrọ ahọrọ. Ọ bụrụ na ịhapụ akara a agbanweghị agbanwe, faịlụ ga-adị na folda nchịkọta ihe ntanetị. Na njedebe ị ga-eji pịa bọtịnụ ahụ na windo ahụ. Download.
N'ihi nke a, ị ga-enwe ndidi ọzọ ma chere maka nbudata faịlụ ahụ iji mezue. A pụrụ ịhụ ọganihu nke ọrụ ahụ na akara pụrụ iche, nke ga-adị na window meghere. N'otu windo ahụ, ntakịrị elu bụ bọtịnụ ahụ "Wụnye". Ọ ga-abụ isi awọ ma na-arụ ọrụ ruo mgbe nbudata zuru ezu.
Na njedebe nke nbudata, bọtịnụ ahụ e kwuru na mbụ "Wụnye" ga-acha anụnụ anụnụ ma ị ga-enwe ike pịa ya. Anyị na-eme ya. E mechighị window windo ya.
Nzọụkwụ ndị a ga-ebido ọkwọ ụgbọala ọkwọ ụgbọala maka eriri Igwe gị. Omume niile ga - eme nke ọma ga - adaba na usoro nhazi ahụ, nke a kọwara na usoro mbụ. Ọ bụrụ na ị nwere ihe isi ike na nke a, gbagoo ma gụọ akwụkwọ ntuziaka ahụ.
Mgbe echichi ahụ zuru ezu, na windo ịchọta (nke anyị gwara ịhapụ oghe) ị ga-ahụ bọtịnụ ahụ "Malitegharịa ekwentị achọrọ". Pịa ya. Nke a ga-ekwe ka usoro ahụ nwee ike ịmalitegharịa ka ntọala na nhazi niile mezuo.
Mgbe usoro ahụ maliteghachiri, ndị na-emepụta ihe nkiri gị ga-adị njikere maka ojiji.
Nke a mejuputara ntinye nke ngwanro.
Usoro nke 3: Nzube Nzube Azuzu
Usoro a dịkarịsịrị n'etiti ndị ọrụ nke kọmputa na kọmputa. Ihe kachasị mkpa bụ n'eziokwu na a na-eji usoro pụrụ iche achọta ma wụnye software. Ngwaọrụ dị otú a na-enye gị ohere ịchọta ma wụnye software ọ bụghị nanị maka ngwaahịa Intel, kamakwa maka ngwaọrụ ọ bụla. Nke a na-eme ka ọrụ ahụ dị ukwuu mgbe ịkwesịrị ịwụnye software ozugbo maka ọtụtụ ngwa. Tụkwasị na nke ahụ, usoro nyocha, nbudata na ntinye na-eme ihe na-akpaghị aka. Ntụleghachi nke mmemme kachasị mma maka ọrụ ndị dị otú ahụ, anyị mere na mbụ n'ime otu n'ime isiokwu anyị.
Ị nwere ike ịhọrọ oke usoro ọ bụla, ebe ọ bụ na ha niile na-arụ ọrụ n'otu ụkpụrụ ahụ. Esemokwu naanị na ọrụ ndị ọzọ na nchekwa data. Ọ bụrụ na ị ka nwere ike imechi anya gị gaa na isi ihe, mgbe ahụ, ọtụtụ na-adabere n'ogo nchekwa data ọkwọ ụgbọala ma na-akwado ngwaọrụ. Anyị na-adụ ọdụ ka ị lelee usoro omume DriverPack. Ọ nwere ma ọrụ niile dị mkpa na nnukwu ọrụ ọrụ. Nke a na-enye ohere ka usoro ihe omume ahụ na ọtụtụ ihe ịchọpụta ngwaọrụ ma chọpụta software maka ha. Ebe ọ bụ na ọkwọ ụgbọala DriverPack bụ ihe omume kachasị ewu ewu na ụdị a, anyị kwadebere gị ntụziaka zuru ezu. Ọ ga-eme ka ị ghọta ihe niile nuances nke ojiji.
Usoro 4: Chọọnụ software site na ID
Iji usoro a, ị nwere ike ịchọta ngwa ngwa maka profaịlụ nke Intel HD Graphics 2000. Ihe kachasị ime bụ ịchọpụta uru nke njirimara ngwaọrụ. Ngwa ọ bụla nwere NJ pụrụ iche, ya mere enwere, ụkpụrụ, ewepu. Na otu esi achọpụta ID a, ị ga-amụta site na isiokwu dị iche, jikọọ nke ị ga-ahụ n'okpuru ebe a. Ozi dị otú ahụ nwere ike ịbara gị uru n'ọdịnihu. Na nke a, anyị ga-edepụta akara njirimara maka kpọmkwem ngwaọrụ Intel.
Ndị a bụ ụkpụrụ ID nke ihe ntanetị nwere ike inwe. Naanị ị ga-edetuo otu n'ime ha, wee jiri ya na ọrụ ọrụ ịntanetị pụrụ iche. Mgbe nke ahụ gasị, budata software ahụ a chọrọ ma wụnye ya. Ihe niile dị mfe. Mana maka foto zuru ezu, anyị dere akwụkwọ nduzi pụrụ iche, nke a na-etinye kpamkpam na usoro a. Ọ bụ n'ime ya ka ị ga-ahụ ntụziaka maka ịchọta ID, nke anyị kwuru na mbụ.
Ihe nkuzi: Chọọnụ ndị ọkwọ ụgbọala site na ID ngwaọrụ
Usoro 5: Onye na-achọ ihe ọhụụ zuru ezu
Usoro ahụ akọwapụtara bụ kpọmkwem. Nke bụ eziokwu bụ na ọ na-enyere aka ịwụnye ngwanrọ ọ bụghị n'ọnọdụ niile. Otú ọ dị, e nwere ọnọdụ ebe naanị usoro a nwere ike inyere gị aka (dịka ọmụmaatụ, ịwụnye ndị ọkwọ ụgbọala maka ọdụ ụgbọ mmiri ma ọ bụ nyocha). Ka anyị lee ya anya n'ụzọ zuru ezu.
Mbụ ị ga-agba ọsọ "Onye njikwa ngwaọrụ". E nwere ọtụtụ ụzọ isi mee nke a. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịpị igodo na keyboard n'otu oge "Windows" ma "R"wee tinye iwu na windo ahụ egosiridevmgmt.msc. Ihe ọzọ ị ga-eme bụ pịa "Tinye".
Gị, n'aka nke ya, nwere ike iji usoro ọ bụla mara na-enye gị ohere ịgba ọsọ "Onye njikwa ngwaọrụ".
Ihe Ọmụmụ: Mepee "Njikwa Ngwaọrụ" na Windows
Na ndepụta nke ngwaọrụ gị niile, anyị na-achọ ngalaba. "Ihe ntaneti vidiyo" ma mepee ya. N'ebe ahụ ị ga-ahụ ihe nhazi Microsoft gị.
Na aha ngwá ọrụ ndị ahụ, ị ​​kwesịrị ịpị pịa aka nri. N'ihi ya, menu ihe ga-emeghe. Site na ndepụta nke arụmọrụ na menu a, ị ga-ahọrọ "Ndị ọkwọ ụgbọala di elu".
Ọzọ, window windo ịchọpụta meghere. N'ime ya ị ga-ahụ nhọrọ abụọ maka ịchọta ngwanrọ. Anyị na-enye ndụmọdụ siri ike na iji "Akpaaka" chọọ na ihe gbasara ihe nkwụnye aka. Iji mee nke a, pịa bọtịnụ kwesịrị ekwesị.
Mgbe nke ahụ gasịrị, usoro ịchọrọ ngwanrọ ga-amalite. Ngwaọrụ a ga-anwa iji aka gị chọta faịlụ ndị dị mkpa na Ịntanetị. Ọ bụrụ na achọtachara ọchụchọ ahụ n'ụzọ gara nke ọma, a ga-arụnye ndị ọkwọ ụgbọala achọta ozugbo.
Sekọnd ole na ole mgbe echisịrị, ị ga-ahụ windo ikpeazụ. Ọ ga-ekwu banyere ihe a na-arụ ọrụ ahụ. Cheta na ọ nwere ike ọ bụghị naanị mma, kamakwa na-adịghị mma.
Iji mezue usoro a, naanị ị ga-emechi windo ahụ.
N'ebe a, n'eziokwu, ụzọ niile ị ga-esi wụnye ngwanrọ maka onye na-eme ihe ngosi Intel HD Graphics 2000, nke anyị chọrọ ịgwa gị. Anyị na-atụ anya na usoro gị ga-aga nke ọma na enweghị njehie. Echefula na ọ bụghị nanị na a ga-arụnyere ngwanrọ ahụ, kamakwa ị ga-emelite mgbe niile na ụdị kachasị ọhụrụ. Nke a ga-ekwe ka ngwaọrụ gị rụọ ọrụ nke ọma na ịrụ ọrụ kwesịrị ekwesị.